MD Farmaajo & RW kheyre Maku saxan yihiin in degdeg Xilka looga qaado Hanti-dhowrihii Qaranka?…W/Q: Maxamed Caalim – Idil News
MD Farmaajo & RW kheyre Maku saxan yihiin in degdeg Xilka looga qaado Hanti-dhowrihii Qaranka?…W/Q: Maxamed Caalim
Aniga waxaan aaminsanahay in sharciga dawladu yahay wax bulshadu Soomaaliyeed heshiis ku tahay. Markaa way adag tahay in Firkir siyaasadeed Go’aan dhaqso ah lagu Gaaro.
Arintan waxay tahay khalad weyn oo dhibaato ku ah in lagu kalsoonaado Dawlada Rajada shacabka ka sugayeen hogaanka Madaxweyne Farmaajo.
Madaxda Dowlada Federaalka Soomaaliya waxey sameeyey wax ku waajiba oo ah inay kulan weyn u sameeyeen oo Salaada Janaasada lagu tukado Wasiirkii Howlaha Guud Marxuum Cabaas C/laahi Siraaji ilahay ha u naxariistee.
Arinkaa aaska Qaran lagu sameeyey waa waajibka Dawladnimo waxaana wax lagu amaano ah in dhamaan madaxda Dawladda Faderaalka ugu saraysaa kawada qeyb galalaan Madaxweynaha dowladda federaaka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre, Guddoomiye Baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari iyo masuuliyin kale oo ka tirsan dowladda.
Intaa ka dib waxay ahay in Gudi loo saaro baaritaan ku sameeya arinka oo ka kooban dhamaan hay’adaha Dawladda sida Xukumada maxkamadaha iyo Golayaasha shirci dajinta Iyadoo wax shaqo joojin ah lagu sameyn Hanti Dhawrka guud ee Dowladda.
Mudo ka yar laba maalmood in Go’aanka xilka qaadis lagu sameeyo waxay muujinaysaa in aan waxba labaarin Sababaha xilka looga qaaday markaan akhriyey way adag tahay in Qodobadan la fahmo. Sida loo Qoray.
3- Wareysigii uu siiyay Idaacada VOA oo lagu tilmaamay inay aheyd mas’uuliyad darro iyo inuu ka hor-dhacay baaristii socotay kuna tilmaamay wixii dhacay inay ahaayeen askar is rasaaseysay, uuna Wasiirka ku dhintay qaab shil,
Dawladdu waa inay muujisaa in la isku Dulqaato si wax loo hubsado.